नेपाल मदर डट कम (www.NepalMother.com) - नेपाल बाहिर नेपालीहरुको सामुहिक आवाज : अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुत डा. अर्जुन कार्की द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपती बाराक ओबामा समक्ष आफ्नो ओहदाको प्रमाण पत्र प्रस्तुत
अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुत डा. अर्जुन कार्की द्वारा अमेरिकी राष्ट्रपती बाराक ओबामा समक्ष आफ्नो ओहदाको प्रमाण पत्र प्रस्तुत
वहाँ अमेरिका आउन साथ हामीले वहाँ लाई दिएको शुभकामना यस्तो थियो :
अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुत डा. अर्जुन कार्कीको कार्यकालको सफलताका लागि हाम्रो हार्दिक शुभकामना र बधाई ।
अमेरिकाका लागि नेपाली राजदुत डा. अर्जुन कार्की आफ्नो कार्यभार सम्हाल्न अमेरिकाको राजधानी वाशिङटन डिसी अाइपुग्नुभएको छ । वहाँ लाई अमेरिकामा हार्दिक स्वागत छ । वहाँको कार्यकालमा नेपाल र अमेरिका बिचको सम्बन्ध अझ प्रगाढ बन्न सकोस । अमेरिकामा बस्ने हरेक नेपालीले पनि नेपाली राजदुताबासलाई आफ्नो अभिभाबक ठान्न, अन्तरमन देखी महशुस गर्न पाउन । वहाँको कार्यकालको सफलताका लागि हाम्रो हार्दिक शुभकामना र बधाई ।
- रामप्रसाद खनाल - अध्यक्ष, अन्तराष्ट्रिय कलाकार मँच एबम समस्त मँच परिवार
अन्तराष्ट्रिय नेपाली साहित्य समाज, वाशिङ्टन डिसी मेट्रो च्याप्टर समस्त परिवार